Zvimwe Zvizvarwa zveZimbabwe Zviri muAmerica Zvoumba Sangano reCOZDA
Zvita 17, 2020
Coalition For Zimbabweans in The D.C. Area (COZDA)
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara munharaunda yeWashington D.C., zvakaumba sangano idzva rinonzi Coalition For Zimbabweans in The D.C. Area, kana kuti COZDA, iro richange richibatsira mukubatanidza zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica nekune dzimwe nyika.
Sachigaro vebhodhi reCOZDA, VaJona Masiya, vanoti chinangwa chikuru chekuumba kwavakaita sangano iri ndechekuunza pamwe vana veZimbabwe muzvirongwa zvakanangana nebudiriro pamwe nekubatsira vanotambura kumusha.
VaMasiya vanoti zvizvarwa zviri mumatunhu anoti Maryland, Washington D.C., Virginia neWest Virginia muno muAmerica zvakaona zvakakosha zvikuru kuti paumbwe hwaro hunobatanidza vana veZimbabwe vagara vaine chido chekubatsira vanotambura vari kumusha nemuno, pamwe nekusimudzira nharaunda dzavanobva.
Vanoti kunyange hazvo vana veZimbabwe vakawanda vari kunze kwenyika vagara vachibatsira vari kumusha nenzira dzakasiyanasiyana, vakaona zvakakosha kuti vanhu vaise musoro pamwechete vachipana mazano munyaya dzebudiriro.
Vanotiwo munhu wese anokodzera kuve nhengo yeCOZDA, uye hapana mari dzinobhadharwa kusangano iri.
Sangano iri richange richibatsirawo kutsvagira vana vanotambura rubatsiro kuti vakwanise kuenda kuchikoro pamwe nekurapwa, uyewo kubatsira munguva ino yeCovid-19.
VaMasiya vanoti vari kuparura zviri pamutemo sangano ravo musi wa19 Zvita, unove Mugovera unouya, zvichiitwa vachishandisa dandemutande reZoom, uye vachange vachitandadzwa nemuimbi wechidiki, Julien King, ari mudunhu reTexas.
Hurukuro naVaJona Masiya
Hurumende Inosimbisa Mutemo Unodzivirira Kupararira kweCovid-19
MDC Alliance Inoparura Chirongwa Chinokurudzira Madzimai Kutora Zvigaro Mune zveMatongerwo eNyika
Mutambi weNhabvu ane Mukurumbira, David Yogi Mandigora, Anoshaya
Hurumende Inovhara Matunhu eKariba neHurungwe neKuda kweCovid-19
Vanhu Voshushikana neKuwanda kweVanhu Vari Kubatwa neCovid-19 Munyika